MaBenchmarks ekutanga eiyo iPhone 7 anoonekwa | IPhone nhau
Iwo ekutanga mabhenji eiyo iPhone 7 anoonekwa: 18% nekukurumidza kupfuura iyo iPhone 6s
Sezvo gore rega rega, pakati peguhwa uye kudonha kunoonekwa kwekutanga bvunzo dzechigadzirwa chiri kutaurwa. Bvunzo dzandiri kureva ndidzo benchmarks, nzira yekuyera kumhanya uye mashandiro efoni kana desktop desktop, uye yekutanga iyo Geekbench 3 yakayera (kuburikidza TechTastic) zvinoratidza kuti iyo iPhone 7 ichave ichikurumidza sePad Pro, chishandiso chine processor yeA9X.
Seperesenti, iyo A10 yakayerwa muyedzo yekutanga ichave a 18% nekukurumidza kupfuura iyo A9, kuwedzera kudiki kwazvo pane kwakagadziridzwa zvakapfuura. Izvo zvakakosha kuti utaure kuti processor iyo muyedzo iyi yakayera ichave mune mukana wese inogona kunge iri prototype, saka yekupedzisira modhi iyo yavanokwira pane iyo iPhone 7 inogona kukurumidza. Kune rimwe divi, mhedzisiro yacho inoratidza chete iyo yeiyo imwechete-yepamoyo bvunzo, ichisiya iyo mbiri-musimboti (kana mamwe macores) uye neGPU dhata isina kurekodwa.
MaBenchmark anoratidza kuti iyo iPhone 7 ichave ichikurumidza sePad Pro
Sezvatakambotaura, musiyano we18% zvine chekuita neA9 inoratidzwa neaya mhedzisiro inogona kusiyana apo iyo iPhone 7 inosunungurwa zviri pamutemo. Muchokwadi, miedzo yekutanga yeA9 yakaratidzawo kuti yaive 18% nekukurumidza kupfuura iyo A8, asi mutsauko chaiwo wakazoratidzwa kuva 43%.
Mumakore achangopfuura, maPhones matsva anosvika aine processor kaviri zvine simba kupfuura iyo yapfuura modhi. Izvi zvaive zvakadaro neA6 yaive nekukurumidza zvakapetwa kaviri kupfuura iyo A5 neA7 iyo zvakare yakapetwa zvakapetwa kumhanya kweA6 kana A8 iyo yaive 20% nekukurumidza kupfuura iyo A7, asi ine giraidhi yekumhanya inopfuura iyo yapfuura modhi inopfuura 50%.
Kune rimwe divi, isu hatifanire kukanganwa chimwe chinhu chakakosha: kugona. Iyo A10 ichave inoshanda zvakanyanya pane iyo A9, processor yatove inoshanda, uye inoshandisa mashoma simba. Dzimwe runyerekupe dzinoti iyo A10 ichagadzirwa mune 10nm maitiro uye zvachose neTSMC kuti, pakati pezvimwe zvinhu, dzivisa imwe "chipgate." Iye zvino isu tinongofanirwa kuramba takamirira kusimbisa kana kuramba makuhwa ese uye urwu ruzivo rutsva runouya kwatiri kubva kuTechTastic.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Iwo ekutanga mabhenji eiyo iPhone 7 anoonekwa: 18% nekukurumidza kupfuura iyo iPhone 6s
Izvo hazvigadziriswe mu10nn sezvo zvakave zvichisimbiswa kuti TSMC haina iyo yakakura maitiro, saka ichave zvakare muna 16nn, kunyangwe mune imwe nzira yekugadzira, izvo zvinoita kuti iite mutete.
Ndine zvakakwana nekumhanya kwe5S.